Jimco, Diisambar 22, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Waxaan ahay taageere John Chow Dot Com, Ramblings-yada kaladuwan ee Dot Com Mogul. Barta internetka, waxaa ku jira silsilad cunto haddii aad rabto, oo ah qorayaasha wax qora. Waxaan u kala saari lahaa John Chow mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya silsiladda cuntada. John wuxuu aasaasay TechZone sanadkii 1999 inta soo hartayna waxay ahaayeen taariikh. John wuxuu awood u leeyahay taariikhdiisa internetka darteed, qoob-ka-ciyaarkiisa madadaalada, iyo aqoontiisa tikniyoolajiyadda. Blog-kiisu waa mid aan fiirinayo maxaa yeelay John waa mid hufan oo shaqsi ahaaneed ku leh boggiisa.
John waa la wadaago awoodiisa shabakada adoo xusaya kuwa qora qoraal dib u eegis ku sameynaya bartiisa. Taasi waa sababta iga dambeysa ee aan halkan wax kaga qoro.
Baloogga John wuxuu sidoo kale sifiican ugu socdaa habka lacag - sababta ugu muhiimsan ee aan ula socdo raashinkiisa. Haddii aad la yaaban tahay sida loo lacag galiyo bartaada, wuxuu noqon karaa kan ugu fiican ee laga bilaabo. John wuxuu waxoogaa tijaabiyay qaabeynta baloogga, goobta xayeysiinta, ilaha xayeysiinta, iwm wuxuuna si naxariis leh uga warbixiyaa dhammaantood. Qayb wanaagsan oo ka mid ah dakhliga xayeysiinta ayaa sidoo kale toos ugu socota sadaqada… taasi waa wax fiican. Dhawaan, John wuxuu xitaa ku sameynayaa xayeysiin toos ah boggiisa halkii uu ka ahaan lahaa dhinac saddexaad. Waxaan rajeynayaa inaan waxbadan ka akhriyo sida ay wax u socdaan.
Haddii aad rabto inaad dhadhan cad ka hesho Yooxanaa, dareenkiisa maad, iyo waxyaabaha ku jira boggiisa, waxaan eegi lahaa waxyaabaha soo socda:
Waa kuma John Chow (ma ahan mid culus)
Waa kuma John Chow (ka culus)
Qaar ka mid ah qoraalladii ugu dambeeyay ee Teknolojiyada
Yooxanaa wuxuu u yimid sidii mid aan cabsi lahayn, laakiin aan isla weyneyn. Waa daacadnimo dhulka u dhacday oo la qadariyo. Ma arkin hal qoraal oo uu uga faa’iideystay ‘mimbarkiisa cagajuglaynta’ oo uu ugu adeegsaday inuu cid ku garaaco. Saas ma aha, waa upbeat iyo inta badan kaftan. Waxaan u maleynayaa in Yooxanaa uu yahay nooca ninka aad jeceshahay inaad biir lahesho. Waxaan ku casuumay inaan iibsado mid ka mid ah marka xigta ee aan joogo Vancouver.
Waxaan aaday Dugsiga Sare ee Vancouver sidaa darteed waxaan ku raaxaystaa aqrinta qoraalladiisa ku saabsan joogitaanka iyo hareeraha mid ka mid ah magaalooyinka aan ugu jeclahay meeraha. Markaa halkaas waad haysataa - dib-u-eegiddayda John Chow Dot Com, Ramblings-yada kaladuwan ee Dot Com Mogul. Koofiyadu waa kuu maqantahay John… mid ka mid ah baraha internetka!
John sidoo kale waa hal heersare oo dhar xidhasho ah iyo qoob ka ciyaar ah…. dhagsii halkan si aad u aragto isaga oo ficil ah.